How Socialists Fight Religion – Leon Trotsky – Burmese Atheists Association
Burmese Atheists Association
Myanmar Coup and Covid Charity Campaign 2021
Struggle Against Blasphemy Law
Let’s kick the Religions out of Public Schools
The Right to Die in Dignity and Comfort
Struggle Against Sex Discrimination Legislation
Search our Articles with keywords.
How Socialists Fight Religion – Leon Trotsky5April 2022
Burmese Atheists joined Protests in Myanmar 25 February 2021
Mandalay Massacre of 2/20/2021 20 February 2021
What is happening in Myanmar 16 February 2021
Myanmar Brisbane Rally7February 2021
How Socialists Fight Religion – Leon Trotsky
Published by hein on5April 2022
ဘာသာရေးဆန့်ကျင်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ယင်း၏အရေးကြီးမှု
(ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီများ ဘာသာရေးကို ဘယ်လိုတိုက်ထုတ်ကြမလဲ)
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာရေးဆန့်ကျင်ရေးဝါဒကို ဘုရားသခင်အား တိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်တိုက်ဖျက်သည့် အဆင့်တွင် မထားရှိနိုင်သည်မှာ ယခုအချိန်တွင် လုံးဝထင်ရှားနေပြီး အငြင်းပွားမှုတို့မှ ကျော်လွန်နေပါပြီ။ ဒီလောက်နှင့် တော့ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မလုံလောက်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူထု၏စုပေါင်းအတွေ့အကြုံအားလုံးထက် သာလွန်ကျယ်ပြန့်စေလျက် လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ၎င်းတို့၏ တက်ကြွသော သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို မြင့်မားစေကာ ၎င်းတို့၏ အပြုသဘောဆောင်သော အသိပညာမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကို ကျယ်ပြန့်စေရင်း ဝိဇ္ဇာအယူဝါဒကို ရုပ်ဝါဒဖြင့် အစားထိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤနယ်ပယ်အတွင်း လိုအပ်လာပါက ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အစွဲအလမ်းများကို တိုက်ရိုက်ထိုးနှက်မှုများပြုလုပ်သည်။ ဘာသာရေးပြဿနာသည် ကြီးမားသောအရေးပါမှု ရှိပြီး အဆိုပါပြဿနာများသည် ယဉ်ကျေးမှုအလုပ်နှင့် ဆိုရှယ်လစ်ဖွဲ့စည်းပုံတို့နှင့် အနီးကပ်ဆုံး ဆက်စပ်နေ ပါသည်။ သူ၏ငယ်စဉ်ဘဝတွင် မာ့က်စ်က ဤသို့ဆိုခဲ့သည်–
•	“ဘာသာရေးဝေဖန်ခြင်းသည် အခြားဝေဖန်မှုမှန်သမျှ၏အခြေခံဖြစ်သည်။”
ဘာသာတရားသည် စကြာဝဠာဆိုင်ရာ စိတ်ကူးယဉ်အသိပညာ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤဝတ္ထု(ဘာသာတရား) တွင် ရင်းမြစ်နှစ်ခုရှိသည်။ သဘာဝတရား၏ ရှေ့မှောက်ရှိ လူသား၏ အားနည်းချက်နှင့် လူမှုဆက်ဆံရေး ပေါင်းစည်းမှုတို့ပင်။
သဘာဝတရားကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း (ဝါ) လျစ်လျူရှုခြင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးကို မခွဲခြမ်း၊ မစိတ်ဖြာနိုင်ခြင်း (ဝါ) လျစ်လျူရှုခြင်းတို့ကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ လူသားများသည် စိတ်ကူးယဉ်လက်တွေ့ဘဝများကို ဖန်တီးပေးပြီး ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုများရှေ့တွင် ဒူးထောက်ကာ မိမိလိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ ဤတီထွင်ဖန်တီးမှု၏ အခြေခံသည် လူသား၏ လက်တွေ့ကျသော လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သော မိမိကိုယ်ကို တည့်မတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး ယင်းမှာ ဖြစ်တည်မှုတိုက်ပွဲ၏ အခြေအနေများမှ ပေါက်ဖွား လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘာသာတရားသည် တည်ရှိမှုတိုက်ပွဲကို အောင်မြင်စွာ ရင်ဆိုင်နိုင်ရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်‌ နေထိုင်တတ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ဤလိုက်လျောညီထွေမှုတွင် လက်တွေ့ကျပြီး သင့်လျော်သော စည်းမျဉ်းများရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါအချက်များအားလုံးတို့သည် ဒဏ္ဍာရီများ၊ စိတ်ကူးယဉ်မှုများ၊ အယူသီးမှုမှုများနှင့် လက်တွေ့မကျသော အသိပညာတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အားလုံးသည် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများ စုဆောင်းခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဘာသာရေးအား ဝေဖန်ခြင်းသည် အခြားသော ဝေဖန်မှုအားလုံးအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်သည်။ မှန်ကန်ပြီး စစ်မှန်သောအသိပညာအတွက် လမ်းခင်းနိုင်ရန်၊ စိတ်ကူးယဉ်အသိပညာကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ဤကိစ္စတွင် မေးခွန်းတစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်မှသာ မှန်ပါသည်။
သမိုင်းအရ၊ တစ်ဦးချင်းကိစ္စများတွင်သာမက လူတန်းစားတစ်ရပ်လုံး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်လည်း ဘာသာရေးအစွဲအလမ်း ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အချိုးအစားအမျိုးမျိုးဖြင့် စစ်မှန်သောအသိပညာကို ချည်နှောင်ထားကြ လေသည်။ ဘာသာတရားတစ်ခုအား ဆန့်ကျင်ခြင်း ယေဘုယျအားဖြင့် ဒဏ္ဍာရီများနှင့် အယူသီးမှုပုံစံ အားလုံးကို ဆန့်ကျင်ခြင်းလုပ်ငန်း အောင်မြင်ဖို့ရာ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တွင် ပေးထားသည့် လူတန်းစား၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေဖို့ရာ လိုအပ်ပါသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် အသိပညာ စုဆောင်းမှုနှင့် အသိပညာ လိုအပ်မှုတို့မှာ ဘာသာတရား၏ အစစ်အမှန် မဟုတ်သော အမှန်တရားများ၏ ဘောင်အတွင်းသို့ မလိုက်လျော၊ မညီထွေဖြစ်သောအခါ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဓားဖြင့် လုံလောက်အောင် ထိုးနှက်လိုက်သကဲ့သို့ ဘာသာတရား၏ အခွံသည် ပြုတ်ကျသွားလေသည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ဘာသာရေးဆန့်ကျင်ရေးဖိအားများ၏ အောင်မြင်မှုများသည် နိုင်ငံတော်နှင့် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် တက်ကြွစွာ ဆက်ဆံတတ်လာကြခြင်း ဟူသော တော်လှန်ရေးကျောင်းကို ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ပါသော အဆင့်မြင့်အလုပ်သမားလူတန်းစား အလွှာများ၏ တိုးတက်လာမှုများကြောင့် လုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ရသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အစွဲအလမ်းများ၏ အခွံကို ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် အလွယ်တကူ ဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည့် အချက်ကြောင့် ထင်ရှားပါသည်။
သို့သော် ဘာသာရေးဆန့်ကျင်ရေးဝါဒဖြန့်မှုသည် ရွာများသာမက မြို့ကြီးများတွင်ပါ တက်ကြွမှုနည်းသော လူဦးရေအလွှာများအထိ သြဇာလွှမ်းမိုးလာသောအခါ အခြေအနေမှာ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ၎င်းတို့ရရှိထားသော တကယ့်အသိပညာသည် အကန့်အသတ်နှင့် အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးမလိုမုန်းထားမှုများ (ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုများ) နှင့် ယှဉ်တွဲတည်ရှိနေနိုင်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနှင့် စုပေါင်းအတွေ့အကြုံများဖြင့် မပံ့ပိုး၊ မကူညီမှုနိုင်ပါပဲ ဤအစွဲအလမ်းများအား အချည်းနှီးဝေဖန်ခြင်းသည် ရလဒ်ထွက်မလာနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် အခြားရှုထောင့်မှ ချဉ်းကပ်မှုကို ပြုလုပ်ရန်နှင့် လူမှုအတွေ့အကြုံနှင့် လက်တွေ့ကျသော အသိပညာနယ်ပယ်ကို ချဲ့ထွင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒီအဆုံးသတ်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က မတူဘူး။ အများသူငှာ စားသောက်ခန်းမများနှင့် ကလေးထိန်းကျောင်းများသည် အိမ်ရှင်မများ၏ အသိဉာဏ်ကို တော်လှန်သော နှိုးဆွမှုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ဘာသာတရားမှ ခွဲထွက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကို အလွန်လျင်မြန်စေပါသည်။ ကျိုင်းကောင်များကို ဖျက်ဆီးသည့် လေကြောင်း-ဓာတုနည်းများသည် တောင်သူလယ်သမားများနှင့် ပတ်သက်၍ တူညီသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်သည်။
အိုင်ကွန်နှင့် ရုပ်ပုံမီးခွက်ပါသော မိသားစု၏ ကျဉ်းမြောင်းသော လှောင်အိမ်ကျဉ်းလေးထဲမှ သူတို့ကို ကလပ်ဘဝတွင် ပါ၀င်စေသည့်အချက်မှာ ဘာသာရေး မလိုမုန်းထားမှုများမှ လွတ်မြောက်ရန် နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ တွေးမိသည်က စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ကလပ်များသည် ဘာသာရေးမလိုမုန်းထားမှုများအား ခုခံနိုင်စွမ်းကို တိုင်းတာနိုင်ပြီး အတွေ့အကြုံနှင့် အသိပညာများ ကျယ်ပြန့်စေရန် သွယ်ဝိုက်နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် ဘာသာရေးဆန့်ကျင်ရေး ဝါဒဖြန့်ခြင်းဖြင့် တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်မှုများအစား ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ အတားအဆီးများနှင့် သွယ်ဝိုက်သောနည်းများအား အသုံးပြုပါသော စစ်ဆင်ရေးများကို အသုံးပြုကြရမည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုကဲ့သို့သောကာလသို့ ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနာဂတ်တွင် တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်မှုကို ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ဟု မဆိုလိုပါ။ ၎င်းအတွက် ပြင်ဆင်ရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
•	ထိရောက်သလား၊ မထိရောက်ဖူးလား။ ထိရောက်ပါတယ်။
•	ရလဒ်တစ်ခုခု ယူဆောင်လာပါသလား။ ယူဆောင်လာပါသည်။
•	ဘယ်သူတို့အား ကျွန်ုပ်တို့ဆီ ဆွဲခေါ်လာစေသလဲ။
•	ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုများထံမှ လုံးလုံးလွတ်မြောက်ရန် ပြင်ဆင်ထားကြလေသော သက်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိသူများအား ကျွန်ုပ်တို့ဆီ ဆွဲဆောင်လာခဲ့ပေသည်။ နောက်ထပ်ရော?
LeonTrotsky – Burmese Atheists
အောက်တိုဘာလရဲ့ တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံကြီးကိုတောင် ဘာသာတရားကနေ မတုန်မလှုပ်ဘဲ ကျန်နေသေးလေတယ်။ ဤနေရာတွင် ဘာသာရေးကို ဆန့်ကျင်ဝေဖန်ခြင်း၊ သရော်စာ၊ ရုပ်ပြောင်နှင့် ကဲ့သို့သော တရားဝင်နည်းလမ်းများသည် အကျိုးရလဒ်အနည်းငယ်ကိုသာ ဖြစ်ထွန်းစေပါမည်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖိနှိပ်လျှင် ဆန့်ကျင်ဘက် ရလဒ်အား ရနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ကို တူးရပါမည် – ကျောက်သည် အလွန်ခိုင်မာသည် – ဒိုင်းနမိုက်ချောင်းများဖြင့် ပိတ်ဆို့ပြီး သွယ်ဝိုက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို အသုံးပြုပါ။ ခဏအကြာတွင် ပေါက်ကွဲမှုအသစ်နှင့် ပြိုလဲမှုအသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကြီးမားသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်မှ လူများ၏ နောက်ထပ်အလွှာတစ်ခု ကွဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ပါတီ၏ အဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဤနယ်ပယ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိအချိန်တွင် ပေါက်ကွဲမှုနှင့် တိုက်ခိုက်မှုတို့မှ ပိုမိုကြာရှည်စွာ ပျက်ပြားစေမည့် သဘာဝသိပ္ပံနည်းကျ ဝါဒဖြန့်မှုဖြင့် ပိုမိုကြာရှည်စွာ ဖြတ်သန်းရမည်ဟု ဆိုသည်။
ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်သော တိုက်ခိုက်မှုသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် လုံးဝမထင်မှတ်ထားသော ရလဒ်ကို မည်သို့ပေးနိုင်ကြောင်း ပြသရန် ကျွန်ုပ်သည် နော်ဝေကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အတွေ့အကြုံမှ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ဥပမာတစ်ခုကို ကိုးကားဖော်ပြပါမည်။
လူသိများသည့်အတိုင်း 1923 ခုနှစ်ဝန်းကျင်အတွင်း ဤပါတီသည် Tranmael ၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် အချောင်သမားအများစုအဖြစ် ခွဲထွက်ကာ လူနည်းစုသာလျှင် ကွန်မြူနစ်အင်တာနေရှင်နယ်အပေါ် သစ္စာရှိသော တော်လှန်ရေးသမားများအဖြစ် ကွဲထွက်ခဲ့သည်။ Tranmael က လူများစုကို ကျော်ပြီး ဘယ်လိုအောင်မြင်ခဲ့လဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ နော်ဝေးမှာနေထိုင်တဲ့ ရဲဘော်တယောက်ကို ကျွန်ုပ် မေးခဲ့တယ်။ ဟုတ်တာပေါ့၊ ခဏတာသာ အောင်မြင်ခဲ့တာ။ နော်ဝေအလုပ်သမားများနှင့် တံငါသည်များ၏ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စရိုက်လက္ခဏာများထဲအား အကြောင်းအရာတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုပြီး သူ ကျွန်ုပ်ကို ရှင်းပြခဲ့သည်။
သိကြတဲ့အတိုင်း ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှာ နည်းစနစ် အဆင့်အတန်း အလွန်နိမ့်ပါးပြီး သဘာဝအပေါ် လုံးလုံးလျားလျား မှီခိုရလေသည်။ ဤသည်မှာ မလိုမုန်းထားမှုများနှင့် အယူသီးမှုများအတွက် အခြေခံဖြစ်သည်။ ရဲဘော်ရဲဘက်တစ်ဦးမှ လိမ္မာပါးနပ်စွာဖော်ပြသည့်အတိုင်းဆို နော်ဝေငါးဖမ်းသမားများအတွက် ဘာသာတရားသည် အကာအကွယ်အ၀တ်အထည်နှင့်တူသည်။ စကင်ဒီနေးဗီးယားတွင် ဘာသာတရားနှင့် ပရောပရည်လုပ်နေသော ပညာတတ်၊ ပညာရှင်များရှိဖူးသည်။ ၎င်းတို့သည် မာ့က်စ်ဝါဒ၏ အညှာအတာမဲ့သော ကြာပွတ်ဖြင့် ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရလေသည်။ နော်ဝေရှိ အခွင့်အရေးသမားများသည် တံငါသည်များအနေနဲ့ ကွန်မြူနစ်အင်တာနေရှင်နယ်အား ဆန့်ကျင်ရန် ဤအချက်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးချခဲ့သည်။
ဆိုဗီယက်သမ္မတနိုင်ငံကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း စာနာနားလည်သူ၊ တော်လှန်ရေးသမား၊ တံငါသည်တစ်ဦးက ကွန်မြူနစ်အင်တာနေရှင်နယ်အပေါ် အလေးသာစွာဖြင့် သူ့ကိုယ်သူ ‌ပြောခဲ့သည်။
“အဲဒါက ဒီလိုဖြစ်လာတာ။ ငါက ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတကာအတွက်ပဲ ဖြစ်ရမယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘုရားသခင်နဲ့ ငါးမရှိရင် ကွဲထွက်သွားမှာဘဲ”
သူပြောတာဟာ ဘာသာတရားရဲ့ လုပ်သားထုပေါ်လစီအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပုံကို ပြဆိုနေတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်သူလယ်သမားများနှင့် သက်ဆိုင်သော မိရိုးဖလာ ဘာသာရေးသဘောသဘာဝသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခေတ်နောက်ကျသောစိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေများနှင့် နီးကပ်စွာပေါင်းစပ်ထားလေသည်။ တောင်သူလယ်သမားများ၏ အမြစ်တွယ်နေသော ဘာသာရေးကို ချေမှုန်းပစ်နိုင်ရန်မှာ သူတို့၏ နက်ရှိုင်းသော ဘာသာရေးအယူစွဲမှုများကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် အစားထိုးသုံးစွဲစေခြင်းဖြင့်သာ ဖြစ်နိုင်မည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သီးခြားနည်းပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတစ်ခုစီနှင့် ဘာသာရေးကို ဆန့်ကျင်သော ဝါဒဖြန့်ခြင်းအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော လူမှုရေးအခိုက်အတန့်တစ်ခုစီ၏ အခွင့်ကောင်းကို မယူရဟု မဆိုလိုပါ။ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါတွေအားလုံးဟာ အရင်ကလို မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ငါတို့မှာ မှန်ကန်တဲ့ ယေဘုယျအမြင်ရှိရမယ်။
အချို့နေရာများတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း အသင်းတော်ဘုရားကျောင်းများကို ပိတ်လိုက်ရုံနှင့် အခြား အုပ်ချုပ်ရေး လွန်ကဲမှုများဖြင့် ထိန်းချုပ်လိုက်ရုံဖြင့် သင်သည် မည်သည့် အဆုံးအဖြတ်အောင်မြင်မှုကိုမျှ မရရှိနိုင်ရုံသာမက ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် သင်သည် ပိုမိုခိုင်မာသော ဘာသာတရား ပြန်လည်ရရှိရန် လမ်းစကို ပြင်ဆင်ပေးမိလိမ့်မည်။ ဘာသာရေးဝေဖန်မှုသည် အခြားမည်သည့်ဝေဖန်မှု၏အခြေခံဖြစ်သည်ဆိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည် လယ်သမားတို့၏အယူသီးမှုများ ပြေပျောက်စေရန်အတွက် အခြေခံဖြစ်သည်ဆိုသည်မှာလည်း အမှန်မဟုတ်တော့ပါ။
လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးနှင့် မြို့နှင့်ရွာကြား တွင်းနက်ကြီး ဖျက်သိမ်းရေးတို့နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ခဲ့သည့် လွန်ခဲ့သည့် အချိန်တိုလေးအတွင်း အိန်ဂျယ် ရေးသားခဲ့သော မှတ်သားဖွယ်စကားများကို ကိုးကားပါမည်။ 1883 ခုနှစ်တွင် Bernstein သို့ Engels မှရေးသားခဲ့သည့်စာမှဖြစ်သည်။
၁၈၈၂ ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်အင်ဂျင်နီယာ Deprez သည် ဝိုင်ယာကြိုးမှတဆင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ပို့လွှတ်သည့်နည်းလမ်းကို တွေ့ရှိခဲ့သည်ကို သတိရပါ။ ကျွန်ုပ် မမှားဘူးဆိုရင် မြူးနစ်က ပြပွဲတစ်ခုမှာ မြင်းကောင်ရေ တစ်ကောင် သို့မဟုတ် နှစ်ကောင်ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ကီလိုမီတာ 50 လောက်အထိ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါသည်။ ဒီနည်းဖြင့် သဘာဝသိပ္ပံ၊ နည်းပညာစသည်ဖြင့် မည်သည့်တီထွင်မှုများကိုမဆို အလွန်အကဲဆတ်တတ်သော Engels ကို အလွန်အထင်ကြီးစေခဲ့သည်။
Bernstein ထံသို့ သူရေးခဲ့သည်။
“Deprez ၏ နောက်ဆုံးတီထွင်မှု… စက်မှုလုပ်ငန်းကို ဒေသန္တရကန့်သတ်ချက်များမှ လွတ်မြောက်စေပြီး အဝေးဆုံးရေအားကိုပင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အစပိုင်းမှာတော့ မြို့တွေကိုသာ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တောင်မှ မြို့နဲ့ရွာကြား ဆန့်ကျင်ဘက် ဝိရောဓိဖြစ်မှုတွေကို ဖျက်သိမ်းရေး အတွက် အားအပြင်းဆုံး လီဗာဖြစ်လာမှာပါ။”
လီနင်သည် ဤစာကြောင်းများကို မသိခဲ့ပါ။ ဤစာပေးစာယူသည် မကြာသေးမီကမှ ထွက်ပေါ်လာသော်လည်း လယ်သမားစိတ်ပညာတွင် ကြီးမားသော အသွင်ကူးပြောင်းမှု လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိစေမည့် ဤအမြင်လဲ သူ့မှာရှိသည်။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ယေဘူယျ အခြေအနေများဖြင့် သတ်မှတ်သည့် “ဘာသာရေး ဖျက်သိမ်းရေး” လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကွဲပြားသော အချိန်ကာလများ ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းများအားလုံးသည် စောင့်ကြည့်မှတ်သားကြရမည်။ သူတို့သည် ဤပြဿနာတွင် ပါတီကို ဦးတည်ရန်၊ အခိုက်အတန့်ကို ရှာဖွေရန်၊ မှန်ကန်သောနှုန်းကို ရရှိစေရန် အမြဲကူညီရမည်ဖြစ်သည်။
ဘာသာရေးကို လုံးလုံးလျားလျား ဖျက်သိမ်းရေးသည် ဆိုရှယ်လစ် အသွင်သဏ္ဍာန် အပြည့်အဝ ဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိလာမှသာ ဖြစ်နိုင်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လူသားအား သဘာဝတရားအပေါ် ယုတ်ညံ့သော မှီခိုအားထားမှုမှ လွတ်မြောက်စေမည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများအား နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ရှင်းလင်းပြီး လူသားတို့ကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမပြုသော၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများ ကင်းစင်သွားသော လူမှုဆက်ဆံရေးအောက်တွင်သာ ရရှိနိုင်မည်။ ဘာသာတရားသည် သဘာဝ၏ ပရမ်းပတာဖြစ်မှုနှင့် လူမှုဆက်ဆံရေး ပရမ်းပတာဖြစ်ရပ်များကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော စိတ်ကူးရုပ်ပုံများ၏ ဘာသာစကားအဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
လူ့ဘောင်လောက၏ပရမ်းပတာဖြစ်မှုများ ပပျောက်တော့မှသာလျှင် ၎င်း၏ဘာသာရေးရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို ထာဝရအဆုံးသတ်နိုင်သည်။
လူမှုဘဝ၏ စီစဉ်လမ်းညွှန်မှု၊ အသိစိတ်နှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုတို့သည် ၎င်း၏ရှုထောင့်အားလုံးအတွင်းရှိ ဝိဇ္ဇာနှင့် နတ်ဆိုးများအားလုံးကို အချိန်တိုင်း ဖျက်သိမ်းပစ်မည်ဖြစ်သည်။
မူရင်းရေးသားသူ – Leon Trotsky (လီယွန်ထရော့စကီး)
ဘာသာပြန်သူ – ဟိန်းထက်ကျော် (Abu Bakr)
– Fourth International Journal, Volume 3, Number 1, January 1966
– J Davis (ed), Labour speaks for itself on religion, 1925
Previous Post Burmese Atheists joined Protests in Myanmar
Developed by Hein Htet Kyaw